LEGO သတင်းများ၊ လာမည့်ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ Brick Fanatics
Adidas Originals LEGO Superstar sneakers ကို UK မှာရနိုင်ပါပြီ
30 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 28 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas, လူကြီးများအတွက် Lego
အဆိုပါ LEGO Group နှင့် Adidas ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောစနီကာများကိုယူကေတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်းသင်လိုအပ်လိမ့်မည်
Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတားဖိနပ်များကိုယူအက်စ်တွင်ရနိုင်သည်
30 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 22 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas, LEGO.com
ဝတ်ဆင်နိုင်သော Adidas မူရင်း LEGO Superstar ဖိနပ်များကို US ရှိ Adidas မှတိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်ပါပြီ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် LEGO ကိုဖန်တီးပါ Marvel stop-motion ဗီဒီယို
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 97 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, LEGO Group, Lego မှ marvel, Lego ကမ္ဘာ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, Lego ကမ္ဘာ့ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း, LEGO.com, Marvel, Marvel: Mech ရူးသွပ်မှု, အဆိုပါ LEGO Group, Tongal
LEGO World Builder ၏အယူအဆပေါ် အခြေခံ၍ ပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝင်နိုင်သည် Marvel: Mech Madness၊ မင်းရဲ့ stop-motion ကျွမ်းကျင်မှုကိုချပြီး
LEGO အကယ်။ အချို့ဘာလဲကွာပေးထားပြီလော Spider-Man ဖျက်လိုဖျက်ဆီး?
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 213 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Disney+, အဲလစ်ဇဘက် Olsen, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Marvel, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
၇၁၀၃၁ မှအချို့သောစာလုံးတစ်လုံး၏အမည် Marvel Studios Collectible Minifigures သည်လာမည့်နှင့်ပတ်သက်သောသော့ချက်အရိပ်အမြွက်ကိုကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်
LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယိုဟာ hairpiece မှိုချိုး
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 34 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO.com, Marvel, မော်နီကာရက်ဘို, WandaVision
LEGO Collectible Minifigures 71031 မှဇာတ်ကောင်များထဲမှဆံပင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် Marvel စတူဒီယို
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 71 Views စာ0မှတ်ချက် 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Ideas, Infinity Saga, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego VIP, LEGO.com, Marvel, VIP, Yan Chevalier
လာမည့်လ၏ LEGO ၏အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များ Ideas လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ 40487 Sailboat စွန့်စားမှုယခုအခမဲ့ရရှိသောရဲ့အပိုင်းအစအရေအတွက်အတည်ပြု, ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွက်ပြင်ဆင်ထားသော LEGO စတိုးပြက္ခဒိန်သည်အစုံလိုက်၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးခြင်းများကိုဖော်ပြသည်
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 203 Views စာ0မှတ်ချက် 30389 Fuzzy & မှိုပလက်ဖောင်း, 30454 Shang-Chi နှင့်မဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, 40448 စပျစ်သီးကိုကား, 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, Classic, DK စာအုပ်များ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Ideas, Lego, Lego Classic, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego မှ marvel, Lego Nintendo, Lego စတိုး, Lego စတိုးပြက္ခဒိန်, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego စူပါမာရီယို, LEGO.com, Marvel, Nintendo, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, စူပါမာရီယို, Yan Chevalier
အဆိုပါ LEGO Group အသစ်သောအစုံ, ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်တွေကိုထုတ်ဖော်, 2021 သြဂုတ်လအဘို့အ updated စတိုးပြက္ခဒိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
LEGO သည်၎င်း၏ Super Mario စမ်းသပ်ချက်များထဲမှတစ်ခုကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းလား။
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 112 Views စာ0မှတ်ချက် Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း, Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, ကို eBay, ကဲ, Lego, Lego စူပါမာရီယို, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ
အဆိုပါ LEGO Group လာမယ့်လမတိုင်ခင်မှာ Super Mario အကွာအဝေးရဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
LEGO Adidas ၏ဖိနပ်သည်မနက်ဖြန်တွင်ရောင်းမည်
29 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 81 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas, LEGO.com
Heads up: Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတားဖိနပ်များသည်မနက်ဖြန်တွင်ရောင်းမည်။